निषेधाज्ञाको तीन साताः टेकु, वीर र टिचिङ अस्पतालमा कस्तो छ कोरोना संक्रमितको चाप? [भिडियो] :: रिता लम्साल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
निषेधाज्ञाको तीन साताः टेकु, वीर र टिचिङ अस्पतालमा कस्तो छ कोरोना संक्रमितको चाप? [भिडियो]
आइसीयू र भेन्टिलेटर पाउन अझै मुश्किल
रिता लम्साल शुक्रबार, जेठ ७, २०७८, २०:३१:००
काठमाडौं– ‘तपाईंलाई के समस्या भयो?’ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको ओपिडी बाहिरै डेस्कमा बसेकी एक नर्सले लाइनमा उभिएका बिरामीलाई सोधिन्।
‘म कोरोना पोजिटिभ हो, आज बोलाउनु भएको थियो। त्यसैले आएको हो।’ बिरामीले जवाफ दिए।
नर्सले उनको औंलामा पल्स अक्सिमिटर राख्दै सोधिन्, ‘केही समस्या छ कि छैन?’
‘अहिले त खासै केही समस्या भएको छैन’ ती बिरामीले भने।
अक्सिमिटरमा अक्सिजन स्याचुरेसन हेर्दै नर्सले भनिन्, ‘अक्सिजनको मात्रा नर्मल छ, यो कागज लिनुस् एकपटक एक्सरे गरेर हेर्नुपर्छ है।’
ती बिरामीको पछाडी पालो कुरिरहेका अन्य बिरामीहरु पनि थिए। ड्युटीमा रहेकी नर्सले सबैलाई पालैपालो उनीहरुको समस्या सोधिन् र सोही अनुसार परामर्श तथा उपचार प्रक्रिया पनि बताइन्।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि दैनिक ओपिडी सेवा पनि सञ्चालन हुने गरेको छ।
होम आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमित तथा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेर चिकित्सकले फलोअपमा बोलाएका बिरामीहरु ओपिडीमा स्वास्थ्य जाँचका लागि आएका थिए।
अस्पतालको ओपिडी भन्दा अलि पर आकस्मिक कक्षको बाहिरका कुर्सी र म्याटहरु शुक्रबार भने खाली थियो। केही दिनअघि त्यहाँ अक्सिजन सपोर्टमा म्याटमा तथा कुर्सीमा रहेका बिरामीको चाप थियो।
अस्पताल भित्र र जस्ताको टहरामा रहेको नयाँ बेडहरुमा भने बिरामीहरु अक्सिजन सपोर्टमा उपचाररत थिए।
आकस्मिक कक्ष बाहिर एम्बुलेन्समा नयाँ बिरामीहरु पनि आइरहेका थिए। एम्बुलेन्समा आएका बिरामीहरुले अन्य दिनमा जस्तो ‘होल्ड’मा बस्नुपर्ने अवस्था थिएन। चिकित्सकहरुले उनीहरुको स्वास्थ्य समस्या सुन्दै आकस्मिक कक्षभित्र लैजादै थिए।
‘अस्पतालमा बिरामीको चाप कम भएको हो?’ हामीले अस्पतालका निर्देशक डा सागर राजभण्डारीलाई प्रश्न गर्‍यौं।
‘तीन–चार दिनदेखि बिरामीको संख्या केही घट्दै गइरहेको छ, तर हामीसँग भएका बेडहरु खाली भने भइसकेको छैन,’ डा राजभण्डारीले भने, ‘हामीले बाध्यताले बाहिर नै बिरामी राखेका थियौं, त्यो संख्यामा भने कमी आएको छ।
डा राजभण्डारीले कोरोना संक्रमणको सुरुवाती अवस्थादेखि नै अस्पतालले कोरोना संक्रमितका लागि ओपिडी सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताए।
उनले नयाँ आउने बिरामीलाई उनीहरुको अवस्था तथा लक्षणको आधारमा परामर्श तथा उपचार सेवा प्रदान गरिएको जानकारी दिए।
यस्तै, फलोअपमा आउने बिरामीलाई मनोपरामर्श तथा उपचार सेवा दिइरहेको बताए।
डा राजभण्डारीले अहिले घरमै रहेका कोरोना संक्रमितहरु गम्भीर अवस्थामा अस्पतालमा आउने क्रम भने बढेको सुनाए।
‘अहिले ज्वरो, रुघाखोकी लाग्दा बिरामीहरु टेष्ट पनि नगर्ने र घरमै औषधि ल्याएर खाने र अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पतालमा आउने क्रम पनि बढेको छ,’ डा राजभण्डारीले भने, ‘स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भइसकेपछि मात्र अस्पतालमा ल्याउँदा उनीहरुलाई अस्पतालभित्र लैजान नपाउदै मृत्यु भइरहेको छ।’
डा राजभण्डारीले शुक्रबार बिहान मात्र २ जना बिरामीको अस्पतालमा आइपुग्ने बित्तिकै मृत्यु भएको बताए।
कतिपय कोरोना संक्रमित उपचार शुल्क महंगो हुने र बेड तथा अक्सिजन नपाइने डरले अस्पताल नआइरहेको हुनसक्ने भन्दै डा राजभण्डारीले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क भइरहेको जानकारी दिए।
‘कुनै पनि संक्रमित घरमै छन्, ७ दिनभन्दा पनि बढी ज्वरो आयो, वान्ता भयो, जलवियोजन भयो भने अस्पतालमा आइहाल्नुस्,’ डा राजभण्डारीले भने, ‘सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गरेको छ, हामीले कुनै पनि बिरामीलाई फर्काएका छैनौं।’
सरुवा रोग अस्पतालमा जस्तै वीर अस्पतालको आकस्मिक सेवा कक्षमा पनि बिरामीको चाप केही कम भएको छ।
केही दिनअघिसम्म आकस्मिक कक्षमा बेड नहुँदा एम्बुलेन्सबाट बिरामी नै नओराली अर्को अस्पतालमा पठाउने गरेको वीर अस्पतालले अहिले एम्बुलेन्सबाट बिरामीहरु आकस्मिक कक्षमा लगिरहेको देखियो।
सरकारले कोरोना संक्रमितका लागि ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। सोही अनुसार अस्पतालले सेवा दिन सुरु गरेको वीर अस्पतालका कोभिड–१९ व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा अच्यूत कार्कीले जानकारी दिए। अस्पतालको आकस्मिक सेवा विभागमै सबै किसिमका कोरोना संक्रमितलाई उपचार तथा परामर्श दिने गरिएको उनले बताए।
आकस्मिक सेवामा खटिएका डा अशोक कार्कीले दुईदिनदेखि बिरामीको चाप कम भएको बताए।
‘तीनदिन अघि त एउटै बेडमा २,३ जना बिरामी राखेर पनि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो, जसले गर्दा अक्सिजन फ्लो कम भएर आकस्मिकमै बिरामीको मृत्यु हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘हिजो, आज बिरामीको फ्लो अलिअलि कम छ, बिरामी कम नै भइसकेका त छैनन्, एउटा बेडमा २,३ जना राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था भने अहिले छैन, एउटा बेडमा एउटा बिरामी नै राखिएको छ तर सबै बेडमा बिरामी छन्।’
अस्पतालमा आउने सबै किसिमका कोरोना संक्रमितलाई उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा उपचार तथा परामर्श आकस्मिक सेवा विभागबाटै दिने गरेको उनले सुनाए।
‘यहाँ अहिले सामान्यदेखि जटिल खालका कोरोना संक्रमितहरु आइरहेका हुन्छन्, सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई आवश्यक परामर्श र औषधि दिएर घर पठाउछौं,’ डा कार्कीले भने, ‘अक्सिजन लेबल कम भएका गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई भर्ना गर्ने गरेका छौं।’
केही साता अघि कोरोना संक्रमितले भरिभराउ देखिएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्ष तथा कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएका भवन परिसर शुक्रबार भने सामान्य थियो । वार्डहरुमा भने बेड खाली थिएनन् । कोरोना संक्रमितहरुको उपचार भइरहको थियो।
बिरामीको चाप धान्न मुस्किल परेको टिचिङ अस्पतालमा पनि अहिले अस्पतालको सिढींमै बिरामी राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन।
अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डा निरज बमका अनुसार अस्पतालमा डिस्चार्ज हुने बिरामीको संख्या पनि बढ्न थालेकाले नयाँ आउने बिरामीलाई प्यासेजमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छैन।
‘सुरुमा सुनामीको लहर जसरी कोरोना संक्रमण देखियोे, बिरामीहरु अस्पतालमा आउने क्रम मात्र भयो, डिस्चार्ज भइहाल्ने अवस्था थिएन,’ डा बमले भने, ‘अहिले बिरामी डिस्चार्ज हुन थाले, त्यसैले पनि अलिकति सहज भएको छ, बिरामीलाई प्यासेजमै राख्नुपर्ने बाध्यता छैन।’
उनले अस्पतालहरुले शय्या थप गरि क्षमता बढाउदै लगेको र लकडाउनको असरले गर्दा पनि संक्रमितको संख्या स्थिर रहेको बताए। उनले दैनिक ३० देखि ४० जना नयाँ बिरामी थपिने र सोही संख्यामा बिरामीहरु डिस्चार्ज हुने क्रम चलिरहेको जानकारी दिए।
तर, आइसीयू र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने बिरामीका लागि भने अझै बेड अभाव नै भएको डा बमको भनाइ छ।
‘आइसीयू तथा भेन्टिलेटर खोज्ने बिरामीको चाप भने कम भएको छैन,’ डा बमले भने, ‘अझै पनि शय्या सहज नै भइसकेको छैन, विषेशगरी आइसीयू र भेन्टिलेटरको त देशभरि नै अभावकै अवस्था छ।’